တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင်၏ WhatsApp စာများကိုဖတ်နေသည်နှင့်မည်သို့လုပ်သင့်သည်ကိုသိရန်။ | Androidsis
တစ်ယောက်ယောက်ကသင်၏ WhatsApp မက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖတ်နေသည်ဆိုလျှင်မည်သို့သိနိုင်သနည်း
Elvis bucatariu | | Android application များ, Android cheat, လဲ tutorial, Whatsapp
သူတို့လုပ်နိုင်တယ်လို့ထင်သလား Clone Whatsapp? ပထမတစ်ချက်မှာမဖြစ်နိုင်ပုံပေါက်သော်လည်းအမှန်တရားမှာသင်၏လူများသည်သင်၏ WhatsApp စာတိုများကိုသင်မသိဘဲဖတ်ရှု။ ရနိုင်သည်။ သင်လုပ်နိုင်တာအကောင်းဆုံးကတော့သင်ယူခြင်းပဲ တစ်ယောက်ယောက်ကမင်းရဲ့ WhatsApp စာတွေကိုဖတ်ရင်ဘယ်လိုရှာရမလဲ လိုအပ်ရင်အခြေအနေကိုဘယ်လိုကုစားမလဲ။
WhatsApp ကို developer များကဖန်တီးရန်အတော်အတန်အားစိုက်ထုတ်ခဲ့ကြပေမယ့် အသုံးပြုသူများအတွက်လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံမှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်သောမက်ဆေ့ခ်ျပို့စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်ကွဲပြားခြားနားသောစမတ်ဖုန်းနှစ်ခုတွင်ဖုန်းနံပါတ်ကို အသုံးပြု၍ လျှောက်လွှာကိုဖွင့ ်၍ မရပါကပြsနာသည် WhatsApp ဝက်ဘ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဖြစ်ပြီးမကြာမီတွင် PC နှင့် Mac အတွက် WhatsApp application ကလိုက်လာခဲ့သည်။
WhatsApp ဝက်ဘ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် PC အတွက် WhatsApp အက်ပလီကေးရှင်းတို့သည်မိုဘိုင်းပေါ်ရှိစကားဝိုင်းများအားလုံးကိုထင်ဟပ်ပြသသည်။ မင်းရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းကို PC နဲ့ချိတ်လိုက်တာနဲ့မင်းကိုသဘောကျသွားမှာပါ multimedia ဖိုင်များအပါအ ၀ င်သင်၏ပြောဆိုမှုအားလုံးကိုကြည့်ပါ သို့မဟုတ်သင့်စားပွဲခုံမှ။ သို့သော်၊ အကယ်၍ သင့်တွင်ကွန်ပျူတာတစ်ခုသာသင်သုံးစွဲခွင့်ရှိသည်ဆိုလျှင်၊ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်အလွန်ကောင်းသည်၊ သို့သော်အခြားသူတစ် ဦး ကသင်၏မက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖတ်လိုလျှင်၎င်းတို့သည်ဤစနစ်၏အားသာချက်ကို အသုံးပြု၍ အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကသင်၏ WhatsApp မက်ဆေ့ခ်ျများဖတ်ခြင်းနှင့်အခြေအနေကိုဖြေရှင်းရန်မည်သို့မည်ပုံသိရန်မည်သို့မည်ပုံ
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းတစ်စုံတစ် ဦး ကသင်၏မိုဘိုင်းကိုမိနစ်အနည်းငယ်မျှအသုံးပြုခွင့်ရှိပါကသင်၏ WhatsApp စာများကိုဖတ်ရန်အတော်လေးလွယ်ကူသည်။ အဆိုပါလှည့်ကွက်သည်အထက်ပါအသေးစိတ်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သော WhatsApp Web တွင်ဖြစ်သည်။ ဒီရွေးချယ်မှုအများအပြား၏အသွင်အပြင်မှ ဦး ဆောင်ခဲ့သည် Desktop (သို့) ဝဘ်အတွက် WhatsApp application ၏အပြုအမူကိုတုပသည့် Android နှင့် iPhone application များ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ WhatsApp အကောင့်နှစ်ခုကိုဖုန်းတလုံးတည်းမှာပဲခွင့်ပြုထားလို့ပါပဲ။ developer အချို့ကတော့ဖော်ပြချက်မှာပိုပြီးစိတ်ရင်းမှန်နဲ့သူတို့ရဲ့ app တွေဟာကလေးတွေနဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုထောက်လှမ်းဖို့ထောက်ကူပေးတာကိုထောက်ပြလို့ပါ။
WhatsApp အကောင့်၏“ ခိုးယူမှု” ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည့် application ၏ဥပမာတစ်ခုမှာ WhatsApp ဝက်ဘ်အတွက် WhatsApp ဝက်ဘ်၊ Google Play စတိုးတွင်ရနိုင်သည်။ လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောနံပါတ်နှင့်အတူဒုတိယကိရိယာပေါ်တွင်မိုဘိုင်း၏ WhatsApp ကိုအကောင့်ပွား.
ကောင်းတဲ့အပိုင်းကအခြားသူတစ်ယောက်ကသင်နဲ့တူညီတဲ့သတင်းစကားကိုလက်ခံရရှိမနေဆိုတာကိုပြောပြဖို့သိပ်မခက်ဘူး။ သင်မည်သို့အောင်မြင်ရမည်ကိုသိလိုလျှင်သင်၏ပထမဆုံး WhatsApp application ကိုရယူသင့်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြေရှင်းနည်းများအားလုံးသည် WhatsApp ဝက်ဘ်စနစ်၏အားသာချက်ကိုယူသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်၊ လျှောက်လွှာ၏အဓိက ၀ င်းဒိုးတွင်၊ menu option ကိုဖွင့်ဖို့အပေါ်ညာဘက်မှာအစက်သုံးခု, ပြီးနောက်သင်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါရမယ် WhatsApp ကိုက်ဘ်.
WhatsApp ဝက်ဘ်ရွေးချယ်မှုများကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည် သင်၏ WhatsApp အကောင့်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော system နှင့် browsers အားလုံးကိုကြည့်ပါ။ လုံးလုံးလြားလြား, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သင်၏စကားပြောဆိုမှုသမိုင်းကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။
ပေါ်လာတဲ့စာရင်းကအချည်းနှီးဖြစ်ပြီး၊ WhatsApp ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာသင့်ရဲ့ browser (သို့) desktop client ကိုတွဲရန်သင့်အားတောင်းဆိုလျှင်၊ သင်ကံကောင်းတာပဲ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်လက်ခံရရှိသည့်စာကိုမည်သူမျှဖတ်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိလျှင်သင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ထားခြင်းကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမရရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
သင်ယခုဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမှမလုပ်နိုင်လျှင်ပင်အနည်းဆုံးဤနည်းဖြင့်သင်၏အနာဂတ်သတင်းစကားကိုမည်သူမျှဖတ်ရှုနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေပါလိမ့်မည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့အမူအရာ သင်ထူးဆန်းသောပုံပေါက်နေသောဘရောက်ဇာများနှင့်ကွန်ပျူတာများကိုဖျက်ပစ်ရန်ညာဘက်မှဘယ်သို့ပွတ်ဆွဲပါ WhatsApp ကို web စာရင်းတွင်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်လည်းအဆုံးမှာခလုတ်ကိုနှိပ်နိုင်သည် "အစည်းအဝေးအားလုံးကိုပိတ်ပါ"တခါ။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်သင်သည် "Chrome" သို့မဟုတ် "Firefox" ကိုပွင့်လင်းသောအစည်းအဝေးများအဖြစ်မြင်သော်လည်းအမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်သင်၏အကောင့်ကိုအခြား terminal တစ်ခုတွင်မိတ္တူပွားထားသောသူလျှို application တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့, သင်သည်ဤစာရင်းကိုအပတ်စဉ်စစ်ဆေးသင့်သည်၊ သို့မှသာသင်၏ WhatsApp စာများကိုမည်သူမျှဖတ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ မမေ့ပါနဲ့ WhatsApp ကိုအခမဲ့ update လုပ်ပါ နောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့၊ ဤနည်းဖြင့်သင်သည်အခြားအသုံးပြုသူများကိုသင်၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲသင်၏စကားစမြည်ဝိုင်းကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည့်လုံခြုံရေးတွင်းများမရှိဘဲလုံခြုံစိတ်ချရသောတည်ဆောက်မှုကိုသင်အသုံးပြုနေကြောင်းသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » တစ်ယောက်ယောက်ကသင်၏ WhatsApp မက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖတ်နေသည်ဆိုလျှင်မည်သို့သိနိုင်သနည်း
မင်္ဂလာပါ !! သင်ပို့လိုက်တဲ့စာကိုတစ်ယောက်ယောက်ကဖတ်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မလဲ။ ပူးပေါင်းကြံစည်မှု ?? ဟက်ကာ ?? နက်နဲသောအရာကို ?? ???????
Elvis bucatariu ဟုသူကပြောသည်
ဆောင်းပါးတွင်မရှင်းလင်းပါကသင်၏စကားဝိုင်းများကိုဖတ်ရှုရန်နှင့်စူးစမ်းရန်တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင်၏ WhatsApp အကောင့်ကိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စက်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မိတ္တူပွားထားခြင်းရှိမရှိကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
Elvis Bucatariu အားပြန်ပြောပါ
ဟယ်လို! Wapp စာများကိုသင်၏မိုဘိုင်းမှဖတ်လို့ရနိုင်လားဆိုတာကိုသင်သိလိုလျှင်၊ PC မှမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် PC တွင် wapp မရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်၏စာများကိုမြင်နိုင်သည်ဟုသံသယဖြစ်ပါသလား။ ဖြစ်နိုင်လား ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!!
Celina Millina ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာပြproblemနာတစ်ခုရှိသေးတယ်၊ အဲဒါတွေဟာ wasap ပါတဲ့နံပါတ်နဲ့ငါ့ fecebook ကဓာတ်ပုံတွေကိုသုံးတာလား။
Celina mllina အားပြန်ကြားပါ
Samsung သည် Galaxy S8 Pirates ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်